Duqa Qardho oo tagay tuulooyin
12 Nov 12, 2012 - 6:48:35 AM
Maamulka degmada Qardho ayaa safar ku maraya deegaano iyo tuulooyin hoostaga magaalada,waxayna u kuurgalayaan xaaladaha amni,Nolol iyo
sidii ay gacan uga gaysan lahaayeen adeegyada nolosha asaasiga u ah.
Duqa Degmada Qardho Maxamed Siicd Ciise (Hogaamo la roor) oo la hadlay Radio Garowe isagoo ku sugan tuulada Busoonow ayaa sheegay in tuulooyinka qaarkood ay wax ka gaarsiinayaan Barnaamijka horumarinta degmooyinka ee JPLJ.
Gudoomiyaha ayaa sidoo kele sheegay inay dadka ay ku dhiirigeliyeen
inay wax-qabsadaan dawlada iyo maamulka degmaduna ay gacan ka siinayaan.
Duqa Qardho ayaa waxa kele oo uu sheegay in maanta ay Qardho ka dhagax dhigeen wadooyin laga hirgelinayo iyo Garoon kubbada Cagata ah.
Halkan ka dhagayso Gudoomiyaha Qardho oo Axmed Cawil u waramay